Iimpawu zokuSebenza ngokuMnandi-Amanzi kwi-Microwave
Ngaba uke wavutha amanzi kwaye wawungeke ubilise , kodwa xa uhambisa isitya, saqala ukuqhuma? Ukuba kunjalo, uye wabhekana nenkqubo yokugcoba. I-Superheating yenzeka xa i- liquid ishushu idlulile kwindawo yayo yokubilisa , kodwa ayibilisi.
I miSebenzi yokuHluleka
Lo mzekeliso ubonisa into eyenziwa yinto ephezulu yokufudumala kuyo iqondo lokushisa eliphezulu kuneyona ndawo yokubilisa, kodwa asiyi kubilisa. I-Spiel496, ummandla woluntu
Ukuze i-bubbles bubbles zenze kwaye zandise, ukushisa kwamanzi kufuneka kuphakame ngokwaneleyo ukuba uxinzelelo lwe -vapor yolwelo lugqithise uxinzelelo lwe-vapor emoyeni. Ngethuba lokugqithisa, i-liquid ayibilise nangona itshisa ngokwaneleyo, ngokuqhelekileyo ngenxa yokuba ukungabikho kombane kwinqwelo-mhlaba kuphazamisa ukubunjwa kwamabhule. Oku kufana nokuxhatshazwa ozivelayo xa uzama ukuvuthela ibhaluni. Nangona xa uxinzelelo lomoya ovuthela kwibhaluni lugqithise uxinzelelo lwemoya, kufuneka uqalane nokulwa nokunyuka kwebhaloli.
Uxinzelelo oluninzi olufunekayo ukuze unqobe ukutshatyalaliswa komhlaba luhluke ngokulingana nobubanzi bombhobho. Ngamanye amazwi, kunzima ukwakha umbhobho kunokuba uphucule okhoyo. Iimpahla ezinemiqatyana kuzo okanye izixhobo ezinxilisayo zihlala zineemibhobho ezincinci zomoya ezinika iibhobho zokuqala ukuze kungabikho ukugqwesa okukhulu. Utywala obunxulumene nolunye utywala obushushu obungenakufezekiswa lunokufudumala kwiidridi eziliqela ngaphaya kwendawo yazo yokubilisa ngaphambi kokuba uxinzelelo lomphunga lwanele ukunqoba ukuphazamiseka kombane. Emva koko, xa beqala ukubilisa, iibhola ziyakwandisa ngokukhawuleza nangokugqithiseleyo.
Amanzi amaninzi aphezulu kwi-Microwave
Ukubilisa kwamanzi kwenzeka xa iimbumba zomphunga wamanzi zanda ngamanzi amanzi kwaye zikhutshwe kuwo. Xa amanzi echazwe kwi-microwave, ingahlala ingaphazamiseki ngexesha lokutshisa ukuze kungabikho iisayithi ze-nucleation ezijikelezayo. Amanzi angcolileyo angabonakala epholile kunokuba kunjalo, kuba amanzi awazange abilise. Ukuhlamba indebe yamanzi aphezulu, ukongeza esinye isithako (umz., Ityuwa okanye ishukela), okanye ukuphazamisa amanzi kunokubangela ukuba ubilise, ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza. Amanzi angabilisa phezu kwekomityi okanye aphephe njenge-steam.
Ukuthintela oku kungenzeki, gwema ukubuyisela amanzi kwakhona. Ukubilisa kuqhuba i-gesi echithwe ngaphandle kwamanzi, ngoko ke xa uvumela ukuba ipholile ngaphambi kokuyilisa kwakhona, kuneendawo ezincinci zokuvumela ukubilisa kwindawo yokubilisa. Kwakhona, ukuba unokukrokrela ukuba amanzi ashushu kangangokuba kufuneka apheke, susa isitya ngenqwelo yexesha elide ukuze usebenzise ukutshisa ngokukhawuleza, ungancitshiswa ukuba utshise. Ekugqibeleni, gwema ukufudumala kwamanzi ixesha elide kunokuba kufuneka
Iimveliso eziNinzi kuneManzi
Ezinye iziselo ngaphandle kwemiboniso yamanzi. Namafutha afanelekileyo angcolileyo, afana nekhofi okanye i-saline, angaphumelela. Ukongeza isanti okanye i-gesi ecocekileyo kumanzi uhlinzeka ngamasayithi e-nucleation anokunciphisa ithuba lokuba ukugqithisa okuza kwenzeka.
Ukutshabalalisa izinto ezifakwe kwiRadioactive Materials
Ngaba Kukhuselekile Ukutya Iqhwa?
Kutheni iLanga leLanga?
Kutheni I-Red Red?
Iinjineli vs Scientist - Yintoni eyahlukileyo?
Indlela Yokuqaphela Ukunciphisa Ukusebenzisa Imigaqo Yobunzima
I-Enthalpy Shintsha Umzekelo Ingxaki
Qinisekisa ukuNgcinwa kunye neNtsholongwane
I-pH kunye ne-PKa Ubuhlobo: I-Henderson-Hasselbalch Equation
Uluhlu lwe-Acids Acids
Inkcazo ye-Eutectic kunye nemizekelo
Indlela yokuguqula iCelcius kwi-Farenheit (° C ukuya ° F)
Iingqungquthela zokuQala kwezoPolitiko zaseMelika
Unzima Kangakanani Uvavanyo lweSikolo esiPhakamileyo seTASC?
UNicholas Yarris: Unyanzelekile Kuze Kuqinisekiswe Innocent
'Ukufa koThengisi loLuntu' uLuntu Loman: uLinda Loman
Ukuvelisa iiNombolo ezingeNqununu
Indlela yokukhetha iKholeji eyiNtloko
Iingqinisiso Zeemveliso Zomthi
Ngaba Wakhe Wazibuza Njani Izityikwi Ziva Ihlabathi Elizungezile?
Uranus Aries kwiiNdlu - uLuhlu lokuQala
Ngaba i-Nibiru iyasondela?
Amagama Amanqaku okuPhumela iimpawu kunye neziMpawu zesiFulentshi
Iziphakamiso kwiNgxabano Inkcazo kunye nemizekelo
Ziziphi izivakalisi ezixhatshaziweyo?
Iyintoni Ingcaciso ye-Earmark?
Ukuhambisa i-Baking Powder kunye ne-Baking Soda
Iifilimu, iiFilimu kunye nabaSebenzi
I-Dos kunye neNtsholongwane yeSikolo soMgaqo weSikolo
Ubume besebonke i-Superman Movie Box Office
Ngaba indoda yaseKennewick iCaucasoid?
10 Amanqaku Nge-Basilosaurus, iWillow Lizard Whale